Nzvimbo diki dzakanakisa mini laptops (11.6 uye 10 inch skrini) inowanikwa mu2019
Mazuva ano kupiwa kwemapeturu akatetepa, akareruka uye anokurumidza emuchadenga akakura, asi kune kwako iwe hukuru hwakakosha kupfuura chero chinhu chipi zvacho, mini laptop inogona kunge iri sarudzo yakanaka.
Nekudaro, kana iwe uchivenga kusimudza makomba akakomberedza uye anorema makomputa uye ukasabvunza zvakawanda kubva kune yako inotakurika shamwari maererano nemashandiro, iwe uchave unofara zvikuru nekamwe kadiki uye compact mini laptops yatinozotaura munyaya ino.
Iyi posvo ndeye zvese nezveakanakisa 11-inch uye madiki madheti anowanikwa mazuva ano muzvitoro. Tave tichiongorora marobhoti anorema-anorema machira emakore e15 ikozvino, saka tinokwanisa kukuudza kuti ndeipi sarudzo dziri nani uye nei, kuitira kuti ubatsire iwe kusarudza chakakodzera chishandiso pane zvaunoda uye bhajeti.
Kungoita kuti zvinhu zvive nyore kwauri, ndakakamura chikamu muzvikamu zvakati:
inodhura 11-inch mini-laptops (anenge mazana mana emadhora kana zvishoma),
premium 11-inch zvishandiso (inenge $ 500 uye pamusoro),
10-inch mini-malaptop uye mahwendefa,
12-inch macaptops (akapatsanurwa chinyorwa).
Ini ndichakuudza zvandinoda pamusoro peimwe neimwe sarudzo, mairi quirks aunofanirwa kuziva, uye ini ndakawedzera zvakare link kune yedu yakadzokorora kuongororwa uye kune yedu webhusaiti webhusaiti, uko iwe unogona kazhinji kuwana zvishandiso izvi kutengeswa zvakadzikira mitengo. Chekupedzisira asi chisiri chidiki, iwe unogona zvakare kubata neni muchikamu chekutsanangudza kana uine mibvunzo kana chero chinhu chekuwedzera kuchinyorwa, ndiri kutenderera uye ndichabatsira kana ndichigona.
Anodhura 11-inch mini laptops uye 2-in-1 hybrids
Iyo inopihwa yebhajeti 11-inch mini malaptops akasiyana, kunyanya mu $ 200 kusvika ku $ 400 skirini yemari isingadhuri yemanyorekodhi, shamwari dzekufamba kana laptops evana.
Usatarisire maitiro ekutanga kana zvigadzirwa mukirasi ino, asi iwe uchawana makomputa akareruka uye akaomarara anokwanisa kubata mabasa ese ezuva nezuva uye anomhanyisa kwemaawa mashoma pakuripirwa.
Ma Chromebooks ndiko kwakanyanya kubheja kwako muchikamu ichi. Chero bedzi vachizadzisa zvaunoda, hausi kuzotsvaga kukosha kwemari yako kumwe kunhu.
Izvo, zvakadaro, zvakakosha kuti unzwisise kuti chii chinonzi Chromebook uye chii chingaite uye chisingakwanise kuita, uye ndakaisa a chinyorwa chose pane ichi chinyorwa pamusoro apa, chaunofanira kupfuura nacho.
Mune mazwi mashoma kwazvo, kana iwe uri paInternet nguva zhinji uye zviitiko zvako zvinosanganisira kubhurawuza, kutarisa mafirimu uye zvikamu paYouTube kana Netflix, kuteerera mimhanzi paSotify, eMail, zvinyorwa-zvinyorwa, uye mamwe mabasa ane chekuita newebhu. , Chromebook mutambo wakakwana.
Aya majaira anokurumidza kupfuura iyo Windows makomputa iwe aunowana emhando imwe chete yemari, pamwe nekuchengeteka uye nyore kushandisa. Nekuda kwemagadzirirwo avo, haufanire kutarisana nekuvandudzwa kana mavhairasi, uye iwe unoisa kunyorera kubva kuchitoro, senge pafoni yako. Kune rimwe divi, kana iwe uchida kumhanya chaiwo Windows software, mitambo kana kuronga kushandisa komputa yako isingaenderane kwenguva yakareba, uchaenda zvirinani kune imwe yeiyo Windows kumhanya dzimwe nzira dzatichakurukura muzvikamu zvinotevera.
Mazhinji ema Chromebook anowanikwa mune ino mutengo chikamu vanowana maviri-musimboti kana Quad-musimbisi processor, 4 GB ye RAM, 16-32 GB yekuchengetedza inokwenudzwa kuburikidza neakaverengerwa kadhi muverengi, IPS skrini neHD kana kunyange yakazara HD resolution, chiteshi cheHDMI yekuona mafirimu pane yekuvhara ekunze, pamwe nehurefu hwehupenyu hwebheti uye nekukurumidza kujaja kugona, mune dzimwe nguva. Sekurudziro, gara kure nemidziyo neIntel Atom processors uye chete 2 GB ye RAM, avo vanotsvedza nezvavanoda nhasi.
Pamusoro apa ndakaunganidza sarudzo yakasarudzika yemhando dzakanakisisa dziripo panguva yekugadzirisa iyi, uye iwe zvakare uchawanazve yakawanda sarudzo kuburikidza kubatana uku.
Izvo parutivi, yedu yakareruka rondedzero yemazano anodhura Ultra-compact Chromebooks iri pasi pazasi:
Acer Chromebook R11 - from ~ $ 220 - compact 2-in-1 laptop ine convertible 11-inch IPS kuratidza, inorema 2.7 lbs, quad-core Intel processor, 4 GB RAM, 16 / 32 GB bhatiri;
Asus Chromebook Flip C302 - from ~ $ 400 - zvishoma zvakanyanya kudhura uye zvakakura, asi premium 2-in-1 laptop ine simbi 2.65 lbs anovaka, 12.5-inch FHD IPS touch-screen, Intel Core M Hardware uye yakakura 39 WH bhatiri.wongororo yedu yakadzama iripo pano).
HP Chromebook 11 x360 - from ~ $ 250 -Kuvakwa kwepurasitiki, kuyera 3.1 lbs, asi tenga inoshanduka IPS HD touchscreen uye yakakura 47 Wh bhatiri;
Lenovo Chromebook C340 11 - from ~ 300 - mutsva mutsva, kuwedzerwa kweiyo yakakurumbira C330 - ichiri kuvakwa yedu yepurasitiki, asi idiki uye yakareruka. Iyo inorema 2.6 lbs uye ichiri kuwana 42 Wh bhatiri, IPS HD touchscreen, uye snappy Gemini Lake hardware platform;
Samsung Chromebook 4 - from ~ $ 250 - nyowani modhi, yekuvandudza yeiyo Samsung Chromebook 3. Compact plastiki kuvaka, inorema 2.6 lbs, inowana IPS 11-inch HD matte isiri-yekubata screen, Quad-core Gemini Lake Hardware uye 39 Wh bhatiri.
Kungoita mamwe emaC Chromebook anowanikwa
Clamshell Windows mabhuku
Ichi chikamu chinosanganisira 11-inch mini-laptops ine tsika yechinyakare fomu-chinhu (clamshell) uye mutengo wekutengesa pakati pe $ 150 kusvika $ 400.
Iko kune mashoma sarudzo dzakasiyana kunze uko, asi rairo yangu ichave yekuvavarira kugadzirisa ine ingangoita 4 GB ye RAM, ingangoita 64 GB yekuchengetedza uye imwe yeanokurumidza CPU sarudzo (mbiri-musimboti, asi ndoda chizvarwa chitsva quad-core), zvikasadaro komputa iri kuzonetseka kunyangwe kubhurawuza kwemazuva ese uye nekureruka multitasking, kana iwe unenge usina nzvimbo yakakwana yekuchengetera Windows uye zvirongwa (kunyanya pane ma16 GB shanduro). Izvi padivi, tarisira 11-inch isiri-inobata TN kana IPS inoratidzira mukirasi ino, isina-backlit kiyibhodhi, makadhi-kuverenga, inokurumidza Wi-Fi neBluetooth, uye yakanyatsogadzirwa-yakareruka epurasitiki miviri ine matete profiles.
Heano mamwe eiyo madiki- $ 300 mauniti andinawo pane radar yangu:
Asus VivoBook E203 - ganda repurasitiki, rinowanikwa mune akati wandei mavara, 11-inch HD TN matte skrini, kusvika kuGemini Lake Celeron / Pentium CPU, 4 GB RAM, 128 GB eMMC kuchengetedza, 38 WH bhatiri, rinorema chete 1 kg / 2.2 lbs, kutenderera $ 200 yemukati gadziriro neGemini Lake Celeron;
Dell Inspiron 11 3000 - plastiki ganda, inowanikwa mune mashoma mashoma mavara, 11-inch HD TN matte skrini, AMD A6 / A9 CPU, 4 GB RAM, 32 GB eMMC chengetedzo, 32 WH bhatiri, 1.1 kg / 2.5 lbs. ne AMD A200;
HP Bhuroka 11 - ganda repurasitiki, rinowanikwa mune akati wandei mavara, 11-inch HD TN matte skrini, kusvika kuApollo Lake Celeron CPUs, 4 GB RAM, 64 GB eMMC kuchengetedza, 37 WH bhatiri, 1.1 kg / 2.5 lbs, inenge $ 180 yepakati masanganiswa neApollo Lake Celeron;
Lenovo 130S - inowanikwa pasi pe $ 170, ichiri compact, yakajeka (2.6 lbs) uye yakagadzirwa nepurasitiki, inowana kiyi isina kudzoka shure, 11-inch HD TN skrini, uye zvishoma nezvishoma Gemini Lake Celeron hardware, 4 GB ye RAM uye 64 GB ye eMMC kuchengetwa, asi idiki 32Wh 5 + maawa bhatiri.
Iyo Asus VivoBook ndiyo yandinoda nekuda kweiyo zvishoma kukurumidza Hardware, yakareruka kuvaka, uye yakakura bhatiri. Iyo HP Stream chigadzirwa chine mwero, asi inouya sesarudzo yechipiri mushure meVivoBook, kunze kwekunge iwe uchigona kuiwana yakaderedzwa, sezvo iri mbiri uye inononoka. Iyo Lenovo 130S ndiyo inodhura mari svinu uye yakazara pane vamwe nevamwe maererano nemaitiro, zvigadzirwa, uye dhizaini, asi inongowana diki 32Wh bhatiri. Chekupedzisira, iyo Inspiron 11 inokwanisika uye inokwanisa kuita ne AMD hardware, asi kwete seinoshanda uye inowana s diki bhatiri.
Iyo HP Stream 11 uye Asus Vivobook E akateedzana zvimwe zviri nani Windows malaptop aunogona kuva nawo emadhora mazana maviri
Kune mamwe zvekare akati wandei e-nicer clamshell 11-inchers iwe yaunosarudza kana iwe uchida kushandisa zvishoma zvishoma. Lenovo naDell vanopa zvisarudzo zvishoma zvinonakidza, asi vari kubhadharisa mari yepamendi yekuvakisa uye yakakurumidza Hardware, nekudaro muvhareji mushandisi angawana kukosha zvirinani nemubhadharo unodhura wakataurwa pamusoro apa.
The Latitude 11 Dzidzo ndizvo zvinopihwa naDell mukirasi ino. Iyi inowana dema redhiabhodhi yepurasitiki kesi iyo inofanirwa kutsungirira zvidiki mabhomba uye madonhwe, matte HD TN kuratidza, yakanaka spill-proof keyboard uye yakakodzera IO (inosanganisira HDMI port, yakazara-saizi USB slots uye kadhi muverengi). Iyo mota ine maviri-quad core Intel Celeron uye Pentium Gemini Lake processors ine kusvika ku8 GB ye RAM uye inosvika ku256 GB yekuchengetedza SSD, uye inowana 42 WH bhatiri. Mhando dzekutanga dzinotangira pamadhora 350, asi shanduro yepamusoro-yekupedzisira dzinotengesa nemari inosvika $ 600. Tevera uku kubatanidza kune mamwe mashoko uye ino yemitengo yakagadziridzwa uye magadzirirwo.
Lenovo inopa imwe yakafanana imwe nzira, iyo FungaPad 11E, nemhando imwechete yakavakwa yebhuruu, matte TN skrini, hardware specs, uye 42 Wh bhatiri. Dzimwe shanduro dzePeoplePad 11E dziripo nechembere chechinyakare Core i3 processor kunyange, uye iyo Lenovo yekupa inowanikwawo kana ikawanikwa kana zvidimbu. Tevera hungano iyi kwekugadziriswa kwekuvandudzwa uye nematengo.
Ichi chikamu chinofukidza chinoshanduka mini-laptops ne inobata kumeso. Pane zvishoma zvingasarudzwa zvekufunga, ingoisa mupfungwa kuti iwe uchiri kuwana miviri yemapurasitiki, isina-backlit keyboards uye zvakanyanya IPS HD inoratidzwa neiyi, kune inenge XXUMX kusvika $ 230.
Iyo HP Pavilion x360 11 2-in-1 yakavakirwa paIntel Pentium kana kunyange Core i3 processors, ine kusvika ku8 GB ye RAM uye kazhinji i 500 GB HDD, zvinoreva kuti pane 2.5 ″ bay mukati umo iwe unogona kunamatira chero chengetedzo yekugadzirisa iwe chaungade. Iko kune zvakare 34 kana 41 Wh bhatiri (paCore i3 config), saka zvakazara bhuku iri rinobata mabasa emazuva ese zvakanaka uye rinopa hupenyu hwakanaka hwebheti.
Mhando parutivi, iyo Pavilion x360 11 inoshandurwa ine HDTN touchscreen, inogadzirwa kunze kwepurasitiki, inowanikwa mune mamwe mavara akasiyana uye inorema yakatenderedza 3.1 lbs.
HP inobvunza pakati pe $ 350 (yeiyo Pentium modhi) uye $ 550 (yeiyo Core i3 modhi) uye unogona tsvaga zvimwe nezvavo kuburikidza neiyi link. Ingo chengeta mupfungwa izvi ichi chekare chakasiyana uye iwe unganetseka kuti uchiri kuiwana mumatanda.
Lenovo's Flex 11 dzakateerana, kune rumwe rutivi, inouya neye mutengo unodhura mutengo, unononoka hardware (Intel Celeron uye Pentium) uye 36 Wh bhatiri. Iyo ichiri kukwira kusvika ku8 GB ye RAM uye inosimudzira M.2 kuchengetwa, saka inogona kuve yakanaka mini laptop zvakare. Iwe unozoona zvimwe nezve mudziyo uyu, wawo kumisikidzwa kwazvino uye mitengo yavo yakagadziridzwa kuburikidza neiyi link.
Dell's Inspiron 11 3000 2-in-1 yakasarudzika nzira yeiyo HPs, yakafanana saizi komputa ine yakafanana fomu-chinhu.
Sarudzo yaDell inowanikwa iine sarudzo hombe yezvishandiso zvehypes kunyange, kubva kuIntel Celeron kusvika kuIntel Core M CPU, 2-8 GB ye RAM uye eMMC kune SSD kuchengetedza. Iyo inowanawo 32 Wh bhatiri, asi iyo skrini ichiri kushandisa TN mapaneru. Iyo Inspiron 11 3000 inogadzirwa zvakare kunze kwepurasitiki, inowanikwa muboka remavara akasiyana uye inorema 3.1 lbs.
Dell anobvunza pakati pe $ 200 uye $ 550 yemakesi aya, uye iwe unokwanisa tsvaga zvimwe nezvavo kuburikidza neiyi link. Ramba uchifunga kuti kune mamwe zvekare maExpiron 11 3000 shanduro, ine yakakura 43 Wh mabhetri uye yakawedzera dhiri dhizaini. Izvo zvinowanikwa mune sirivheri uye iwe unofanirwa kuziva zviri nyore nekwavo kwekunze-chimiro.
Dell's Inspiron 11 3000 inowanikwa mune akawanda mavara uye gadziriso
Iyo yekutanga 11.6-inch ultraportable laptops
Kunyange vazhinji vagadziri vakatama yavo yepakutanga ultraportables vakananga ku12-inch chikamu mumakore achangopfuura, iwe uchiri kuwana kukosha kwakanaka neiyo shoma premium 11-inchers yakanyorwa pazasi, kunyanya sezvo izvi zvinowanzo kubhadhara. Vamwe vacho ndevekare kunyange, uye iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti unonzwisisa uye unokwanisa kugamuchira izvo zvavo.
HP ProBook X360 11 Dzidzo
Iyi ndeimwe yemasarudzo mashoma ane michina yemazuva ano, inoshandurwa yakasimba 11-inch inoshanduka inosangana neMIL-STD-810G zviyero, saka yakanakira vana, nekuda kwekugona kwayo kupona kunetswa kwezuva nezuva uye dzimwe nguva.
Rondedzero yacho inosanganisira chero Apollo Lake Celeron / Pentium kana Intel Core m3 processor, inosvika ku8 GB ye RAM uye SSD kuchengetedza, padivi ne 41 WH bhatiri uye bhaisikopo-proof keyboard, tucked yese mukati me3.2 lbs plastiki ganda. Izvo zvinongouya chete neTN HD skrini kunyange, uye ini ndingadai ndakatarisira IPS pani mune ino mutengo uwandu.
Iyo ProBook x360 11 inotanga pasi peUS $ 350 panguva yeiyi shanduro, asi iyo yepamusoro yekupedzisira magadziro anotengesa kweanenge madhora 700. Tevedza iyi link kune rumwe ruzivo uye yakagadziridzwa masisitire / mitengo.
Iyo ProBook X360 ine rugged uye yemazuva ano, asi inogona kudhura
HP EliteBook Shandura 810
Iyo Elitebook Revolve 810 imhando yekare, asi ichiri imwe yeiyo yakazara 11-inchers yaunowana muzvitoro. Inowana simbi yakanaka yekumusoro simbi, yakanakisa kudzoka kumashure uye yekumhara-chiratidzo kiyi, inopenya IPS inoshandura yakawanda-inobata touchscreen, Core U (5th gen) Hardware uye 44 Wh bhatiri.
Vanogona kutenga vatengi vanogona kunyunyuta nezve screen's HD-chete kugadziriswa uye yakagadzirwa Hardware mukati, asi zvese zviri zviviri zvinofanirwa kuve zvakanaka zvakakwana mukushandiswa kwemazuva ese.
Kana iwe ukatarisa kupfuura awa ma-quirks, iyo Revolve 810 inogona kunge iri zvauri kuda, kunyanya sezvo ichideredzwa zvakanyanya mazuva ano, sekugadzirisa kweCore i5 ne8 GB ye RAM uye 128 GB yekuchengetedza SSD inotengesa nemari shoma inodarika $ 500. Tevera uku kubatanidza kune mamwe mashoko.
Iyo EliteBook Revolve 810 ichiri imwe yeiyo yakazara 11-inchers iwe yaunowana muzvitoro.
Iyi zvakare yemhando yekare, asi inotsvedza uye yakareruka inongoremera iyo inorema 2.3 lbs, zviri nyore kwazvo kutakura zvakatenderedza. Yakagadzirwa nepurasitiki, saka haina kusimba senge sarudzo dzeHP, asi ichiri yakavakwa zvakanaka uye yakataridzika. Iyo inowanikwawo FHD IPS touch screen, chimwe chinhu chisarudzo zvimwe, uye yakanaka isina-backlit kiredhi.
Iyo Yoga yakagadzirirwa neIntel Pentium kana 5th gen Core M Hardware, ine kusvika ku8 GB ye RAM, SSD yekuchengetedza uye 40 Wh bhatiri, saka haina kukurumidza seEliteBook, asi inobata mabasa ese epamhepo zvakanaka uye zvakanyanya kunyarara. sezvo ichivakwa pane isina fan.
Iyo 11-inch Yoga 710 yakanga ine mutengo mukuvambwa uye ichine yakachengetedza chunk yakajeka yekukosha kwayo. Mazuva ano iwe unogona kuwana Pentium shanduro dzemadhora 500, asi iwo maCore mamodeli achiri kutengesa pamusoro pe $ 600. Tevedza iyi link kune rumwe ruzivo uye yakagadziridzwa masisitiro uye mitengo.
Iyo Yoga 710 ndeye yakaonda-uye-yakavhenekera 11-inch inoshanduka uye isina fan
Apple Macbook Mhepo 11
Ticharamba tichitaura nezve 11-inch MacBook Air mukati umu, kunyange isisiri chinhu chataikurudzira, nekuda kwemainongedzo ayo akanyorwa, iyo isina kunaka TN glossy skrini, uye ichiri mutengo-tag.
Iyo yekuvaka mhando, typing chiitiko, iyo yakareba bhatiri hupenyu uye kunyangwe mashandiro ekubata mabasa ezuva nezuva achiripo, asi izvi zvinogona kunge zvichiri kutenga kwakanaka kune vamwe vako kutsvaga kuwana MacBook yakachipa, kunyangwe neizvi zvakakosha quirks, asi chete kana iwe uchigona kuwana yakaderedzwa zvakanyanya, ye $ 500 kana pasi. Tevedza iyi link kune yemitengo yakagadziridzwa.
Ingo chengeta mupfungwa kuti a yakaderedzwa kana Certified Refurbished 12-inch MacBook inogona kunge iri imwe nzira yakanaka, uye iwe zvakare uchawana zvirinani-kukosha zvishandiso mu Windows musasa.
Zvakadii nezve 10-inch mini laptops?
Nemabhuku emambure asisiri echokwadi, haugone kuwana 10-inch mini laptop muzvitoro zvakare mazuva ano, nezvimwe zvisaririra sePanasonic Ngatitarise semuenzaniso, iyo inongowanikwa muJapan. Iko kune zvakadaro zvakati wandei zvakanaka Windows mahwendefa ane gumi-masendimita masikirini ekufunga, uye aya anowanzo kuve akabatanidzwa nemabhodhi ekhibhodi kana mapepa, saka anogona kushandiswa semabhuku maviri kana maslate.
Pakati pavo, iyo Microsoft Surface Go ndiyo yekuenda-kurudziro seimwe yevashoma 10-inch zvishandiso zvine zvemazuva ano specs uye maitiro. Izvo zvakare zvine mutengo unodhura uye uchafanirwa kubhadhara mari inosvika $ 400 yeiyo piritsi, kana zvimwe kuti uwedzere RAM uye yekuchengetedza nzvimbo, iine midziyo yakaita seinobata keyboard folio uye iyo Surface peni sekuwedzera. Microsoft inopa zvidzikiso zvevadzidzi / vabereki / vadzidzisi / vashandi vemauto gore rese, pamwe nemasumbu akasiyana siyana uye nguva nenguva kuderedzwa kune wese munhu wese, saka iwe unofanirwa kutarisa ziso pane yavo saiti kuti ivandudze uye itibatsire.
Kunyangwe isiri yakachipa, iyo Surface Go inofanirwa pese pese. Iyo yakavakwa kubva kurefu dhigirium alloy ine Gorilla Girazi pamusoro pechidzitiro, inopenya zvakanyanya kungoita 1.15 lbs, uye inowana yakanaka-yemhando 10-inch touchscreen ine 3: 2 factor ratio uye rutsigiro rwepeni. Izvi zvese zvinofambiswa neine-low-simba, zvakadaro zvine hunyanzvi zvisingaite Pentium Gold chikuva, paine 4-8 GB ye RAM uye 64-128 GB yekuchengetedza, nepo 28 WH bhatiri mukati rinopa kutenderedza maawa e5-6 hupenyu uye 6-8 maawa evhidhiyo. Iyo bhatiri inobhadharisa kuburikidza ne USB-C, btw, uye inotsigira kukurumidza kuchaja.
Zvese mune zvese, iyo Surface Go inoshanda zvakakwana seyakamira-yega mudziyo, asi inonyanya kushandurwa kana yakasungirirwa diki-rakakura, asi zvisina kudaro yakanaka uye inodzosera kiyi kiyi kiyi.
Iwe uchazowana zvimwe nezve iyo Surface Go kubva iyi kuongorora, uye iwe unokwanisa kutarisa mashandiro ezvazvino nemitengo kuburikidza ichi or ichi kubatana.
The Lenovo Tablet 10 ndiyo imwe nzira yekufunga kana iwe uri mushure me 10-incher iyo inogona kugara kwenguva refu pachibharo chimwe nechimwe, inosanganisira sarudzo yekubatanidza LTE, inopa mamwe madoko uye kazhinji iri ergonomic laptop, sezvo uyu anowana dhigi reki, kwete kiyi folio (ona mifananidzo yacho kuti uone).
Inotangira pamari inosvika $ 400 zvakare, kana $ 500 nekhibhodi, asi Lenovo inopa dzimwe nguva discomputer kune yakaderera se $ 350. Inowana 16: 10 10.1-inch IPS touchscreen, ine peni rutsigiro, uye iri tad inononoka kupfuura iyo Surface Go, sezvo iri mota neIntel Apollo Lake Pentium processors uye chete 4 GB ye RAM. Inogona kugara kwe6-7 maawa ekushandiswa kwemazuva ese, nekuda kweiyo 39 Wh bhatiri mukati, asi izvo zvinogumburisa uremu ku1.45 lbs, uye iyo keyboard haina kudzoka shure.
Zvese mune yese Surface Go ndichiri kufarira, asi Tafura 10 kubva kuLenovo inogona kuva yakanaka imwe sarudzo kana uri pabhajeti rakasimba. Tevedza iyi link kune imwe yakadzama enzanisa pakati pezviviri, uye ino yemitengo yakagadziridzwa uye magadzirirwo panguva iyo uri kuverenga ichi chinyorwa.
Dzimwe nzira dzinodhura dzinosanganisira kusarudzika Lenovo Yoga Book kana vamwe vakuru Asus Shanduko Pad Minis uye Acer Aspire Chinja mahwendefa, kana iwe uchiri kugona kuwana ivo mune stock.
Iwe zvakare uchawana zvimwe zvishoma-zvinozivikanwa zvigadzirwa zvinotengesa pasi pe $ 200, fanika CHUWI Hi10 Mhepo, ivo Fusion5 Tablet PC kana RCA Cambio 2-in-1, (mamwe mashoko achishandisa iyi link) asi izvi hazvisi zvigadzirwa zvatinogona kuburitsa pachena nekuda kwezvikonzero zviviri zvakakosha: kunaka kwemubvunzo uye rutsigiro. Zvakadaro, chero bedzi iwe uchinge uchitora ivo kubva kune vanozivikanwa chitoro seAmazon, Walmart kana Best-Buy, ini ndinofungidzira iwe unogona kuvapa kuyedza, asi gadzirisa zvaunotarisira uye uzvigadzirire iwe kuti umhanye muzviratidzo.
Aya ndiwo ma11.6 uye 10 padiki malaptop uye ma mini mahwendefa andinotarisa izvozvi kana ndingave ndiri mumusika wekombuta-compact komputa, ingave Chromebook kana Windows kumhanya sarudzo.
Vazhinji vavo vano chengeta avo vako pane mashoma mabhajeti, avo vanotsvaga michina yekushandisa zvakanyanya piritsi, kana avo vanotsvaga sekondari yekufambisa mabhuku kana anodhura mabhuku ekunyorera vana vako. Idzo sarudzo dzekumusoro-kuguma 11 uye 10-inchers ishoma mazuva ano, apo ma OEM mazhinji akatama avo akasarudzika-tier sarudzo takananga kumakirasi e12-inch uye 13-inch, inopa yakawedzera skrini-nzvimbo uye yakawanda nzvimbo yezvinhu zvinodiwa uye masero ebhatiri.
Kana iwe uchida mamwe simba mune fomu diki-chinhu asi, iwe unofanirwa kutarirawo angu rondedzero yakawanda yezvakakurudzirwa 13-inch ultrabook uye akaonda-uye-mwenje laptops zvakare, kwauchazowana zvakakura uye zvakakura zvisarudzo kupfuura zvataurwa mune ino nyaya, asi uchikwanisa kuzadzisa zvinodiwa zvakanyanya maererano nekuita, chiitiko chiitiko, zviyero zvemhando yepamusoro, madoko kana hupenyu hwebhatiri.
Tine izvozvo mupfungwa, tichaputira izvi pano. Ndiri kugara ndichivandudza iyi runyorwa rwema mini-laptops sezvo zvishandiso zvitsva zvinokodzera zvinotanga, saka chengetedza iyo link uye udzoke mune ramangwana. Kana iwe ukaona chero kukanganisa, chengetedza kupangidzira chishandiso chakashayikwa kubva pane izvo kana kungoda kuwedzera chero chinhu kuchinyorwa, siya mhinduro pazasi, ini ndiri pedyo kupindura uye kubatsira kunze.